प्रदेश सांसदहरुलाई गरेको कारबाही मान्य नहुने-राजेन्द्र महतो - Rautahat News
‘प्रदेश सांसदहरुलाई गरेको कारबाही मान्य नहुने-राजेन्द्र महतो’
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार १४:२१
रौतहट न्यूज़// जनता समाजवादी पार्टीका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रदेश सांसदहरुलाई गरेको कारबाही मान्य नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभाका आफ्ना चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको विषयमा नेता महतोले फर्जी कारबाही मान्य नहुने बताएका हुन् । उनले उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको कारबाही आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
उनीहरुलाई कारबाही गर्नका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेको भन्दै नेता महतोले प्रदेश सभाका बहुमत सांसदलाई कसैले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै उक्त निर्णय कार्यन्वयनमा नआउने बताए ।
जसपाले अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बावुराम भट्टराईले पार्टी निर्णय विपरित कार्य गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।